ISegóbriga, ipaki lemivubukulo eSpain | Izindaba Zokuhamba
España Izwe elinezinkulungwane zeminyaka yomlando futhi yingakho linezindawo eziningi zasendulo ezithakazelisa abathandi bomlando nezakudala. Isibonelo, esifundazweni saseCuenca kukhona i- Ipaki Yemivubukulo yaseSegóbriga.
Kuyisethi yamanxiwa asinde ukuhamba kwesikhathi kahle futhi avumele ongoti ukuthi bazi impilo yansuku zonke yasendulo Imiphakathi yamaCelt namaRoma lendawo. Sikumema ukuba uthathe uhambo olubonakalayo lwepaki, ngethemba lokuthi bazokwenza ufune ukuthatha uhambo oluncane ukuze ulazi.
2 Vakashela iSegóbriga Archaeological Park
3 Yini ongayibona eSegóbriga Archaeological Park
Amanxiwa okuvubukula baseSaelices, umasipala waseCuenca emphakathini we UCastilla la Mancha. Ukutholakala kwayo kubuyela emuva ekupheleni kwekhulu le-XNUMX lapho kutholakala ithuna elihlanganisiwe elivela ngekhulu lesi-XNUMX BC, elabelwa iqembu lamaCeltiberian kusukela eBronze Age. Ithuna laqoshwa ngamatshe amatshe amatshe amatshe kanti abavubukuli bacabanga ukuthi kwakungelenqaba yaseCeltiberia.
Eminye imibhalo ixhasa umbono wokuthi iSegóbriga yokuqala, eyaseCeltiberia, yalandelwa yiSegóbriga yaseRoma ngemuva kwezimpi zaseSertorio. UPlinio naye unikela ngezakhe ngokuqamba iSegóbriga njengenhloko yeCeltiberiae, indawo leyo kuleyo minyaka eyafinyelela eClunia futhi eyakhokhela iSigungu Sezomthetho sikaCaesar Augusta.
Ngaphansi kwamaRoma uSegóbriga wayebaluleke kakhulu ensimini kuze kufike ezingeni lokuthi ngesikhathi sika-Awugusto iyeke ukuba ngumthelo futhi yaba a umabhebhanaNgamanye amazwi, idolobha elalilawulwa amaRoma, okwathi ekugcineni lazitholela ukwakhiwa kwezakhiwo ezingcono kanye nengqalasizinda, kubandakanya nodonga, inkundla yemidlalo kanye nenkundla yemidlalo yaseshashalazini onamanxiwa ayo siwabona namuhla.
Ngemuva kokuwa kweRoma kwaqhubeka nokubaluleka kepha kubonakala sengathi Ukuchithwa kwabantu kwaqala ngokuhlasela kwamaSulumane selokhu abaqokiwe banquma ukubalekela enyakatho. Ngemuva kokunqotshwa kabusha, indawo yagcwala kabusha kwezinye izindawo futhi amanxiwa akhohlwa kancane kancane. Idolobha lasendulo nelibalulekile lanyamalala kusihlwa.
Vakashela iSegóbriga Archaeological Park
Uma uhamba ngemoto ungangena kusuka kuCarrascosa del Campo umgwaqo uye eVillamayor de Santiago, eSaelices. Ipaki ivulwa kusukela ngoLwesibili kuya ngeSonto kusuka ngo-10 ekuseni kuye ku-6 ntambama noma ukufinyelela kokugcina kuvunyelwe ngo-5 ntambama. Ehlobo ivulwa ngo-10 ekuseni kuye ku-3 ntambama futhi kusukela ngo-4 kuye ku-7: 30 ntambama. Ukungena kubiza ama-euro ayi-6 kepha uma ungumfundi ama-2, ama-euro angama-50 futhi uma uthathe umhlalaphansi noma ungasebenzi ukhokha i-euro eyodwa kuphela. izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha zikhululekile. Amakhadi esikweletu ayamukelwa.
Ukuqonda okunembile kwamanxiwa kukhona Isikhungo Sokutolika ukuthi kuyisakhiwo esihlanganiswe kahle nezwe futhi esibukeka njengendlu ejwayelekile yamaRoma. Ngokungangabazeki ukugcwalisa ukuvakashelwa kwepaki lokuvubukula ukuqonda, ukuhumusha nokuthola ngokomlando amanxiwa. Unombukiso unomphela negumbi lokuqagela okubukwayo nokubukwayo. Endaweni yokwamukela izivakashi kwethulwe imvelaphi nomlando wedolobha futhi egumbini lemnyuziyamu uzobona umphakathi othakazelisa kakhulu, imayini, izikhumbuzo kanye nempilo yansuku zonke.
Kufanele ubale isilinganiso se- phakathi kwamahora amabili kuya kwamane ukuvakashela ipaki. Uma uhamba wedwa, uhambo luholwa yimigwaqo egandayiwe ejikeleza phakathi kwamanxiwa. Kukhona nokuvakashelwa kwamaqembu kepha kufanele ubhukhe futhi amaqembu angabantu abaphezulu kakhulu abayi-15. Uma uthanda i- ukuhamba ngezinyawo Sekwenziwe umjikelezo wezindlela ezungeze ipaki ukuze ukwazi ukujabulela indawo.
Yini ongayibona eSegóbriga Archaeological Park
Ngokuyinhloko amanxiwa amahle aleli dolobha lasendulo agxile e-Amphitheatre, i-Circus, iTheatre, iVisigoth Basilica, iWall kanye neSango Elikhulu, iNdlu Yommeli Wezimayini, Isithangami, Amachibi Okushisa Wetheyetha kanye IGymnasium, iBasilica, i-Cryptoportico yeForamu neCuria, i-Acropolis, i-Aqueduct, iNecropolis, amaMonumental Baths kanye neBasilical Hall.
Inkundla yezemidlalo: kwakusemnyango womuzi kanye neTheatre, uhlangothi ngalapha. Siyi-elliptical ngesimo futhi sinamamitha angama-75 ubude. Umthamo wayo kwaba izibukeli 5. Phakathi kwezitendi nenkundla yezemidlalo kukhona isigcawu esiphakeme, iphaseji elimboziwe elixhuma iminyango futhi livumele ukuxhumana kwangaphakathi kunyakaze abantu nezilo.
Indawo yaseshashalazini: incane kepha igcinwe kahle. Kulinganiselwa ukuthi ukwakhiwa kwayo kwaqedwa ngesikhathi sikaClaudius noma eNerón kodwa yamiswa cishe ngonyaka we-79 AD Izinyathelo zihlukaniswe zaba izingxenye ezintathu ezixhunywe izitebhisi futhi zehlukaniswa ngokwezigaba zomphakathi.
Iforamu: Kuyisikwele esingunxande emgaqweni omkhulu wedolobha, unompheme ozungezile onamakholomu amakhulu. Lesi sikhungo sezepolitiki nezenhlalo sedolobha sihlehlela emuva nge-15 BC
Amabhati Amakhulu: zakhiwa ngekhulu lokuqala AD futhi zaziyindawo yokuzivocavoca umzimba, inhlanzeko kanye nebhizinisi. IPalestra, ichibi lokubhukuda, igumbi lokushintsha, i-frigidarium, i-tepidarium, i-caldarium ne-sauna eyomile, konke bekugxilwe lapha.
Umsele wamanzi: yahlinzeka idolobha ngamanzi futhi kamuva yasatshalaliswa ngemithombo ehlukahlukene etholakala lapha nalaphaya egqumeni. Sasenziwe ngokhonkolo futhi sasinomhubhe womthofu amanzi ayehamba kuwo.
Izindawo zokugeza ezishisayo zeTheatre neGym: bayiziphethu ezishisayo kusukela ngesikhathi sika-Awugustu ezazikhuthazwa yizikhungo zokuvivinya umzimba zamaGrikhi futhi zaqondiswa ebusheni. Uzobona i-sauna eyomile, eyodwa inechibi kanye nendawo yokuguqula indawo enezikhiye zayo.
Udonga: Yayiphakeme ngamamitha ayi-1300 XNUMX futhi yakhiwa ngesikhathi sika-Awugustu. Kwakuneminyango eminingana.
Lezi ngezinye zezakhiwo zaseRoma ozozibona ohambweni lwakho kepha nasepaki yemivubukulo kukhona amanye amanxiwa okungezona ezangesikhathi samaRoma, njengeVisigoth Basilica eyayingelutho futhi ingekho ngaphansi kwesakhiwo sokuqala esivubukulwe esethini yamanxiwa. Inama-naves amathathu, ahlukaniswe ngamakholomu ayi-10 kanye ne-crypt.
Njengoba ukwazi ukubona, ipaki liyiqoqo lezincithakalo futhi uma usuku lokuvakasha lumnandi ungahamba uzungeze futhi ujabulele ukwakheka komhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Impelasonto » ISegóbriga, ipaki lemivubukulo eSpain